काठमाडौंमा सबै पसल खुल्ला, सीडीओको आदेश रद्दीको टोकरीमा ! सीडीओ भन्छन्– पसल खुलेको थाहा छ, आफैं सचेत हुने हो>> – Chautari Online
काठमाडौंमा सबै पसल खुल्ला, सीडीओको आदेश रद्दीको टोकरीमा ! सीडीओ भन्छन्– पसल खुलेको थाहा छ, आफैं सचेत हुने हो>>
September 13, 2020 494
२८ भदौ, काठमाडौं । भनिन्छ– समाजमा जुन कानून लागू हुँदैन, त्यस्तो कानून बनाउनु नै बेकार छ । जुन आदेशको पालना हुँदैन, त्यस्तो आदेश दिने शासकहरु नै मूर्ख हुन् ।
उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तोकेका शर्तहरु यस्तै अव्यवहारिक ठहरिएका छन् ।
उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले कुन बार कुन पसल खोल्ने र कुन बन्द गर्ने भन्ने सूची सार्वजनिक गरेका थिए । तर, लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट निस्सासिएका काठमाडौंबासीले जिल्ला प्रशासनको त्यो आदेशलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिएका छन् ।
व्यवसायीको प्रश्न– कहिलेसम्म बन्द गर्ने ?
‘बन्द बन्द बन्द ! सधैं बन्द गरेर हुन्छ ? हामीलेचाहिँ पेट पाल्नुपरेन ? न्यूरोडको संकटा मन्दिर जाने बाटोमा एक इलेक्ट्रोनिक्स पसलेले भने, ‘सधैं बन्द गर्दा व्यापार त ठप्प भयो भयो, सामान बिग्रिएर ठूलो नोक्सानी हुँदैछ, के यसको क्षतिपूर्ति कसैले दिन्छ र ?’
तर, १६ सिटभन्दा कम यात्रु चल्ने माइक्रो र टेम्पुमाथिको प्रतिबन्ध भने जबरजस्त कार्यान्वयनमा आएको छ । साना सवारी चालकहरुले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सकेसम्म आफैं सचेत हुने हो : सीडीओ दाहाल
बन्द गराउने आदेश दिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि आदेश पालना नभएको स्वीकार गर्छन् । अहिले काठमाडौंमा सबै प्रकारका पसलहरु प्रायः खुलेका छन् । केही सटरहरु बन्द पनि देखिन्छन् ।
बार अनुसार पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएको आदेश उलंघन भएको भन्ने विषयमा प्रशासन पनि जानकार छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले धेरै ठाउँका पसलहरु सबै खुलेको आफूलाई पनि रिपोर्टिङ भएको बताए ।
‘केही ठाउँहरुमा सबै पसलहरु खुलेको छ भन्ने रिपोर्टिङ पनि आएको छ, हामीले निर्णय गर्‍यौं, हामी नै अनुगमन पनि गराउँछौं,’ सीडीयो दाहालले भने, ‘एकैचोटि भन्दा पनि विस्तारै सहज बनाउँदै जाने हो, आफैं पनि सचेत हुन जरुरी छ ।’
उनले अनुमगन गरेर सचेत हुन सबैलाई आग्रह गरिने उनले बताए । आदेश कसैले कसैका लागि दिएको नभई आफ्नै लागि भएकाले पालना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।
शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले फुटपाथका पसलहरु बन्द गराउनुपर्ने भन्दै सीइडीयो दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएकी थिइन् । यसबारे के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए ।
‘उपमेयरज्यूले ज्ञापनपत्र नै बुझाउनुभएको छ, के गर्ने भन्ने अहिले नै भएको छैन, हामी छलफल गरिरहेका छौँ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने ।
फोटो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर
Prevआजको राशिफल बि.सं. २०७७ साल भदौ २९ गते सोमबार : पाथिभारा माताले सबैको कल्याण गरुन !
Nextअब दुई हजार रुपैयाँमै पीसीआर टेस्ट